Wasiirka Gaadiidka iyo Ganacsiga DDSI oo Maanta Xadhiga ka jaray Xarunta Rugta Ganacsiga iyo iskaashatooyinka DDSI. - Cakaara News
Wasiirka Gaadiidka iyo Ganacsiga DDSI oo Maanta Xadhiga ka jaray Xarunta Rugta Ganacsiga iyo iskaashatooyinka DDSI.
Jigjiga(cakaaraNews) Sabti Sept 21,2013.Xukuumada DDSI ayaa waxay 3dii sano ee ugu danbeeysay dadaal dheeriya galisay siddii kor loogu qaadi lahaa guud ahaanka ganacsiga deegaanka taasi oo mudnaan gaar ah siisay ganacsiga gaarka loo leeyahay (privatization-sector) si looga midha dhaliyo qorshaha ay xukumadu dajisatay ee 5 sano (GTP) waana mid kor loogu qaadayo Kobaca Dhaqaale iyo raasamaalka Qoys kasta.
Sidoo kale xukuumada deegaanka ayaa ka furtay Dhamaanba Deegaanka Xafiiska Adeega iskaashatooyinka yar-yar oo ay Ujeedadu tahay sidii Shacabka loo maarayn lahaa Nolol-maalmeedkooda iyadoo la siinayo Amaah lacageed ay ka dhigtaan Raasamaal ay ku shaqaystaan. Xukuumada oo sii ambaqaadaysa Kor uqaadida kobaca dhaqaale iyo Dhiirigalinta Private Sectorka ayaa waxay ka aas-aastay rugta ganacsatada iyo iskaashatooyinka DDSI sanadkii 1995TI inkasta oo aanay waxba ka qabanin wakhtiyaddii hore ujeedooyinka loo aas aasay,si loo adkeeyo nidaamka horumarinta ganacsiga gaarka ah ee DDSI xukuumada iyo ganacsatadu in dib loo habeeyo qaabdhismeed kii hore ee jiray looguna magacbixiyo rugta ganacsatada iyo iskaashatooyinka DDSI.
Hadaba xafladdii maanta xagiga lagaga jarayay rugtan ganacsatada iyo iskaashatooyinka DDSI ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka gaadiidka iyo ganacasiga DDSI mudane c/laahi yuusuf, maareeyaha wakaalada ganacsiga yar yar DDSI mudane cabdi bille c/laahi xoghayaha rugta ganacsiga iyo iskaashatoyinka Dr daahir iyo qaybo ka mid ah ganacsatada DDSI, waxaana xadhiga ka jaray xarunta rugta ganacsatada iyo iskaashatooyinka DDSI wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga DDSI mudane c/laahi yuusuf.
Isaga oo wasiirku ka hadlayay munaasabadaasi xadhiga lagaga jarayay xaruntaasi ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumadu dalaal baladhan ugu jirto sidii ay ganacsatada deegaanka ugala shaqayn lahayd hirgalinta horumarinta ganacsiga deegaanka abuuritaanka iyo kobcinta suuq-gayn xor ah iyada oo la adeegsanayo isku xidhnaanta, baraarujinta kor u qaadida ganacsiga, maalgalinta abuurita suuqa iyo dhismaha awoodaha. Wasiirku waxa uu ganacsadada deegaanka mar uu la dar daarmayay siwayn ugu booriyay in ay noqdaan ganacsato ku dhiiran ka midho dhalinta horumarinta ganacsiga islamarkaana ay xubno fir fircoon ka noqdaan rugtan ganacsiga iyo iskaashatooyinka DDSI iyo waliba in ay ganacsatada deegaanku noqdaan kuwa tartan ganacsi la gala duwa dalkeena itoobiya, afirka iyo kuwa aduunkaba.
Dhankiisa waxaa xafladdii xadhiga laga jarayay ka hadlay maareeyaha wakaalada ganacsiga yar yar (micro finance) mudane cabdi bille c/laahi ayaa ka warbixiyay ahmiyada ay rugtani u leedahay ganacsatada ,iskaashatooyinka iyo waliba xukuumada iyada oo siwayn uga shaqayndoonta isku xidhka, iskaashiga iyo adkaynta wada shaqaynta ganacsatada deegaanka wada shaqaynta ruga heer fadaraal iyo kuwa dibadaba.
Dr daahir oo ah xoghayaha rugta ganacsiga iyo iskaashatooyinka DDSI oo ka hadlay madashaasi ayaa waxa uu ka warbixiyay jahooyinka fulineed ee rugta ganacsiga iyo iskaashatooyinka isaga oo sheegay in si looga midho dhaliyo ay muhiimtahay in la raaco jihooyinka horumarined ee ay tajisatay rugtani iyada oo laga tixraacayo ka ay xukuumadu u dajisay qaybaha ganacsatada ee gaar ka loo leeyahay(privatization sector).
Dhankooda waxaa iyaguna ka warbixiyay dareenkooda ku aadan xaflada furitaanka rugta ganacsiga iyo iskaashatooyinka qaarka mid ah ganacsatada DDSI. Kuwaasi oo dhamaantood sheegay in ay siwayn u soo dhawaynayaan furitaanka xaruntan taasi oo siwayn uga qayb qaadan doonta ayay yidhaahdeen horumarinta ganacsiga.